AU Youdzwa Kuita Mitemo Yakajeka kuMauto Anobvuta Masimba
Kukadzi 06, 2018
Mutungamiri wePan African Parliament VaRoger Nkodo Dang.
Mutungamiri weparamende yeAfrica, kana kuti Pan-African Parliament, VaRoger Nkodo Dang, vari kushanya muZimbabwe nechinangwa chekuona mamiriro akaita zvinhu zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
VaDang vari kuperekedzwa nemumiriri weAfrican Union ku United States, Doctor Arikana Chihombori.
Vachisvika muZimbabwe, VaDang vakarumbidza zvikuru hurumende itsva yeZimbabwe vachiti vanokorokotedza mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, uye vanotambira hurumende yavo.
Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zvakaitwa nemauto muZimbabwe hazvifanirwe kugamuchirwa nemasangano emu Africa nekuti zvaikaitwa nemauto zvaive kunze kwemutemo.
Nyanzvi mune zvamatongerwo enyika, uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, VaTendai Ruben Mbofana, vanoti African Union, SADC nemamwe masangano muAfrica, vanofanira kugadzirisa mitemo yavo inobata kutorwa kwemasimba nemauto muAfrica.
VaMbofana vaudza Studio7 kuti: “Kutanga pazvaitika kuEgypt apo VaMohammed Morsi vakabviswa pakutonga nemauto aitungamirwa naVaAbdel Fattah el-Sisi, mubatanidzwa weAfrican Union hapana zvawakaita asi vakaratidza kuti havachaziva mitemo yavo yakange yapunzwa namauto. Izvi zvinofanirwa kupera nokuti hatidi kuti mauto abvise hurumende achishandisa nzira dzipi zvayo.”
VaMbofana vanoti zviri pachena kuti VaMugabe vakabviswa zvichisimba nemauto, uye aitungamira mauto, VaConstantino Chiwenga, vakabva vaitwa mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika.
Vatiwo muhurumende iripo ine makurukota akanga ari muhurongwa hweOperation Restore Legacy, zvinova pachena kuti mauto akapindira mumatongerwo enyika muZimbabwe.
Hurukuro NaVa Tendai Reuben Mbofana